प्रदेशबीचको लगानी प्रतिस्पर्धा | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय प्रदेशबीचको लगानी प्रतिस्पर्धा
सम्पादकीय 1 views
प्रदेशबीचको लगानी प्रतिस्पर्धा
आमनिर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि प्रदेश सरकार बनेलगत्तै प्रदेश–प्रदेशबीचमा ठूला आयोजना र कलकारखानाको निर्माणका लागि लगानी बढाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनिएको थियो । अहिले त्यही कुराको शुभसङ्केत पाइएको छ । त्यो अपेक्षाअनुसारको प्रतिस्पर्धा प्रदेश सरकारको गठनसँगै शुरू भइसकेको छ । केही दिनदेखि आइरहेका समाचारमा प्रदेशहरूका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बोलेको यस्तै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आआफ्नो प्रदेशमा विभिन्न सम्भावना भएको तर विगतमा केन्द्रीय प्रणालीको सरकारले ठूलो लगानी नगर्दा त्यसको विकास हुन नसकेको बताउँदै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न उद्योग, कलकारखाना, कृषि, जलविद्युत्जस्ता ठूला लगानीमा कर नलगाउने घोषणा गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, निजीक्षेत्रले गर्ने यस्ता ठूला लगानीमा लगानी नउठुञ्जेलसम्मको ग्यारेण्टीसमेत सरकारले लिने प्रतिबद्धता पनि आउन थालेका छन् ।
केही समयअगाडि २ नं. प्रदेशबाट त ‘लगानी गर, सुरक्षा मात्र होइन, नाफाको ग्यारेण्टी नै दिन्छौं’ भन्नेसम्मको प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तो प्रतिस्पर्धा आउनु राम्रो कुरा हो । लगानी गर्ने वातावरण राम्रो बनाउन मद्दत त गर्छ । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले विचार गरेरै त्यस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका होलान् त ? यसमा भने केही भन्न सकिन्न । किनभने केही स्थानीय निकायहरूले व्यवसायमा कर थप्ने ‘ट्रेण्ड’ शुरू गरिसकेका छन् । साथै, अहिले प्रदेश सरकारहरूले पनि वातावरण सुधारको नाममा अर्को तरीकाले कर उठाउन शुरू गरिसकेका छन् । यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दैन । त्यस्ता कर असुलीलाई रोक्न केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न शुरू पनि गरिसकेको छ । यसरी एकातिर लगानी गर्न आऊ, नाफासमेत ग्यारेण्टी गर्छौं भन्ने तर अर्कातिर विभिन्न कर पनि थप्ने गरेको हेर्दा भने मन्त्रीहरूका प्रतिबद्धता सोचविचार नगरी आएका जस्ता देखिन्छन् ।
यस्तो बेलामा प्रदेश सरकारका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी बस्न तयार हुन्छन् भने केन्द्रीय सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक परेको परिमाणमा बजेट दिनुपर्छ ।
प्रदेशका मन्त्रीबाटै नाफाको ग्यारेण्टी गरिदिने जुन प्रतिबद्धता आएको छ, यो एकदमै हुनै नसक्ने कुरा हो अर्थात् यो असम्भव छ । नाफाको कम र सार्वजनिक हितको पक्ष बढी भएको पूर्वाधारमा लगानी गर्दा नाफाको ग्यारेण्टी दिनुसम्म ठीकै होला । तर, अन्य क्षेत्रको लगानीमा समेत नाफाको ग्यारेण्टी दिन प्रतिबद्धता गर्नु पत्याउनै नसकिने कुरा हो । यसरी ग्यारेण्टी दिएर त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसको उत्तरदायित्व के ? प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल र मन्त्रीहरूसमेतलाई संस्थागत, सामूहिक एवम् उत्तरदायी बनाउने हो भने मात्र त्यस्तो ग्यारेण्टी दिने अनुमति दिइनुपर्छ । तैपनि अहिले प्रदेश सरकारमा जुन उत्साह देखिएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । यस्तो बेलामा प्रदेश सरकारका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी बस्न तयार हुन्छन् भने केन्द्रीय सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक परेको परिमाणमा बजेट दिनुपर्छ । किनभने अहिले फलाम तातेको छ । यस्तो बेलामा काम पनि राम्रो हुन्छ र प्रदेशको विकास हुन धेरै समय लाग्दैन ।
हरेक प्रदेशमा विभिन्न सम्भावना देखिएका छन् । कुनै प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भावना छ भने कुनैमा पेट्रोलियम पदार्थको, कुनैमा विभिन्न खानी रहेका छन् । कुनै प्रदेशमा जलविद्युत् र सिमेण्ट कारखानाका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेका छन् । यस्ता सम्भावना बोकेका प्रदेशमा आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउने हो भने उक्त प्रदेशको विकास द्रुत गतिमा हुनेमा दुईमत छैन । पहिला पनि त्यस्ता सम्भावना नदेखिएका भने होइनन् । तर, केन्द्रीय प्रणालीको सरकारले बजेट छुट्याउँदा बजेटले त्यस्ता सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई समेट्न सकेको थिएन र ओझेलमा परेका थिए अर्थात् बजेट अभावले विकास गर्न सकिएको थिएन । अहिलेका सरकारले आफूलाई फोकस गरेर काम गर्ने भएकाले पनि प्रदेशको विकास हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । तर, अहिलेका स्थानीय निकाय प्रदेश सरकारको मातहत होइनन् कि जस्तो देखिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई कत्तिको विश्वासमा लिन सक्छन् र काम लिन सक्छन्, त्यसमा पनि भर पर्छ ।
चामत्कारिक बजेटको अपेक्षा
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०५:५६
शेयरबजार र रिकोर्स लेण्डिङ
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०५:४४
राजनीति सङ्लने अवसर
६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०५:३५
बजेटमा वृद्धभत्ताको विकल्प
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०८:२२